Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Imaaraadka Carabta » Qarax aad u culus oo ruxay Dubai
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Crime • News • Waajib ah • Ammaanka • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka Imaaraadka Carabta • Wararka kala duwan
Wali ma cadda baaxadda khasaaraha ka dhashay qaraxa ka dhacay dekedda iyo xamuulka ku xeeran.
Gariirka ka dhashay qaraxa ayaa laga dareemay Dubai oo dhan.
Qaraxa ayaa cirka u diray kubad dab weyn.
Wali lama soo sheegin wax khasaare ah iyo inta uu gaarsiisan yahay khasaaraha.
Dadka reer Dubai ayaa soo sheegay inay maqleen qarax aad u weyn oo magaalada oo dhan goor dambe oo Arbacadii ah, iyadoo qaar ka mid ah goobjoogayaasha ay soo dhejiyeen muuqaalo iyo sawirro kubbadda dabka oo aad u weyn oo kor u kacday deked ku taalla Dubai.
Sida ay sheegeen mas’uuliyiinta dowladda magaalada, dab weyn ayaa ka dhex kacay konteenar ku kaydsanaa markab ku xirnaa dekadda Jebel Cali, iyadoo magaalada ugu weyn Imaaraadka uu ka dhacay qarax weyn.
Saraakiisha ayaa sheegay in aysan jirin warar degdeg ah oo ku saabsan khasaaraha. Wali ma cadda baaxadda khasaaraha ka dhashay qaraxa ka dhacay dekedda iyo xamuulka ku xeeran.
Dabka ayaa ahaa mid aad u weyn waxaana laga arkay dhanka dekedda, sida laga soo xigtay muuqaalo lagu baahiyay baraha bulshada.
Muuqaalo kale ayaa muujinaya adeegyada gurmadka deg -degga ah ee Dubai oo isku dayaya in ay dabka ku damiyaan qashin fara badan oo ku kala firdhay dekedda agteeda markabkii waxyeelladu soo gaadhay, iyo barkado dab ah oo weli ku gubanaya meel u dhow wax u muuqda burburka weelka.
Illaa iyo hadda wax dhaawac ah lama soo sheegin, ayay dawladda Dubai ku sheegtay warbixin dambe. Kooxda Difaaca Rayidka ee Dubai ayaa la geeyay si ay dabka wax uga qabtaan, waxay intaas ku dartay, waxaana la xakameeyay dabka.
Dekedda Jebel Cali ee Dubai waa midda ugu weyn adduunka iyo tan ugu weyn Bariga Dhexe. Waxay u adeegtaa xamuulka ka yimaada qaarada -hoose ee Hindiya, Afrika iyo Aasiya. Dekedda, oo ay maamusho DP World, waxay leedahay afar terminaal oo fidsan oo konteenarro ah kuwaas oo qaadi kara qaar ka mid ah maraakiibta ugu waaweyn adduunka.